| | Affichages : 16774
Toerana anisan’ny mamokatra voly an-tanety raha ny ilany andrefan’ny faritra Vakinankaratra iny indrindra fa ny vary, ny tsaramaso, ny voanjo lava. Indrisy anefa fa vokatry ny doro tanety sy ny fandripahana ny ala dia anjakan’ny lavaka ny tampotanety, miha tery sy miha-manta araka izany ny tany.
Ny talata 31 oktobra lasa teo àry dia nisy ny fampiofana notaterahan’ny ekipan’ny Caritas Diosezy Antsirabe ireo tekinisianina ifotony miara-miasa aminy tany Tatamolava Ankazomiriotra. Fampiofanana izay mahakasika indrindra ireo tekinika fiarovana ny nofon-tany amin’ny fampiasana ny tsipimiraabo narahina fampiharana ny fambolena voly miaro sy manatsara ny tsiron’ny tany toy ny tephrosia sy ny crotalaire ary ny vetiver.
Toy ny mahazatra, ny fampiofanana dia natao tao anatin’ny fifampizarana tanteraka niarahana tamin’ireo solotenan’ny tantsaha teny an-toerana. Ary izany dia notanterahana teny anivon’ny vala tahaka na « champ de démonstration » amin’ny fiteny vahiny. Ity farany izay fomba fiasa fanaon’ny Caritas Antsirabe hampihelezana tekinika iray na maromaro eny anivon’ny tantsaha.
Natomboka tamin’ny fomba fanamboarana ny Baka A (Sary n°1) ny fotoana. Izany dia nahafahana nanazava indrindra ireo pitsopitsony ara-tekinika tsy maintsy voafehy amin’ny fanamboarana sy fampiasana ny Baka A. Notohizina tamin’ny fampiharana ny fomba fanoritana ny tsipi-mira-abo ny fiofanana izay nahitana ny fandraisana anjara mavitriky ny tantsaha tonga nanatrika. (sary n°2)
Nofaranana tamin’ny fampiharana ny fampivadiam-boly vary antanety sy soja ny fihaonana. Ity tekinika farany ity dia hezahin’ny Caritas vohizina eny amin’ny tantsaha manoloana ny fahateren’ny tany sy fitantanana ny tsiron’ny tany fa indrindra koa mba hananan’ny tantsaha sakafo ampy sy maro loko.
Afaka volana vitsivitsy dia azo hatao tsara ny mitondra tantsaha hafa hitsidika io vala tahaka io.